Ilo wareedyo ayaa tilmaamaya in Apple ay joojisay soo saarista moodooyinka iMac 4K ee 512 GB iyo 1 TB ee SSD | Waxaan ka socdaa mac
Ilo wareedyo ayaa tilmaamaya in Apple ay joojisay soo saarida 4 GB iMac 512K moodooyinka iyo 1 TB SSD
Waxaa laga yaabaa inaan heysano 4k iMac mid ka dhakhso badan intii aan fileynay. Sida laga soo xigtay ilo gaar ah oo ku dhow silsiladaha wax la siinayo, Apple waxaa laga yaabaa inay joojiso soo saarista moodooyinka qaarkood ee iMac 4k. Gaar ahaan kuwa 21,5 inji oo wata 512GB iyo 1TB oo ah SSD adag. Waa waxa la rumeysan yahay in cusboonaysiinta moodelladani ay ka dhowaan karto, in ugu dambayntii laga tirtiro suuqa sabab kasta oo kale.
Sida la hubo ilaha u dhow silsiladaha bixinta oo kanaalada isgaarsiintu ay ka dhawaajisay AppleInsider, waxay u badan tahay in shirkadda Californian-ka ay joojineyso 4-inch 21,5k iMac oo leh 512 GB awoodo adag iyo 1 TB TB ah. Waxa ugu macquulsan ayaa ah inay sabab u tahay cusboonaysiinta mustaqbalka ee qalabkan kahor intaadan ka fikirin in Apple ay go'aansatay inaysan sii deyn nuucaan nooca ah si gaar ah markale.
In kasta oo aan la ogeyn sababta keentay in la joojiyo soo saarista moodelladan gaarka ah oo la rumeysan yahay inay sabab u tahay cusbooneysiin, sabab kasta waxay noqon kartaa mid sax ah. Waa inaan sugnaa oo aan aragnaa haddii Apple uu xaqiijinayo warkan. Ma aaminsani inay sii deyn doonto wax qoraal ah oo gaar ah oo ku saabsan, laakiin waxaan heli doonaa jawaabta markaan aragno haddii cusbooneysiinta moodelladan si dhab ah loo soo bandhigay.
Waxa ay tahay inaad ku xisaabtanto ayaa ah in labada moodelba aan hadda la heli karin. bogga Apple. Markaa kaliya qaabka 256 GB SSD iyo qaabka TB-da ee 1 Fusion Drive ayaa hadda la heli karaa. Weli waa la heli karaa inkasta oo aan sugi doonno waqti dheer si aan u helno. Sidaa darteed waa inaan ka fikirnaa macluumaadka ay bixiyeen ilaha laga tashaday, haa way saxnaan karaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Ilo wareedyo ayaa tilmaamaya in Apple ay joojisay soo saarida 4 GB iMac 512K moodooyinka iyo 1 TB SSD
Dhacdada bishaan Apple miyey noqon kartaa cusbooneysiinta websaydhka?
Nooca cusub ee beta ee macOS Big Sur 11.3 markan kan dadweynaha